Accueil > Gazetin'ny nosy > Barea : Aza manonofy ry Malagasy !
Barea : Aza manonofy ry Malagasy !
Tsara dia tsara ny fientanam-pon’ny Malagasy amin’izao fotoana izao amin’ny fandraisana anjaran’ny Barean’i Madagasikara (Ekipam-pirenena Malagasy amin’ny baolina kitra) handray anjara amin’ny fiadiana ny tompon-dakam-pirenena Afrikanina izay hatao any Egypta manomboka amin’ny faha 21 jona 2019 izao. Haharitra iray volana ity lalao ity. Sambany eo amin’ny tantaran’ny baolina kitra Malagasy vao handray anjara amin’ny sokajin’ny famaranana toa izao ny ekipa malagasy.
Aoka hazava ny raharaha fa faly avokoa ny Malagasy manontolo tsy misy ankanavaka. Na kely na lehibe ary na tantsaha na ambony vohitra.Hatramin’ny mponina eny amin’ny Akamasoa aza dia miandrandra fandresena ho an’ny Barea.
Na izany aza dia aza manonofy atoandro isika Malagasy ka hilaza fa hibata fandresena. Raha ny famakafakana ataonay dia mbola tsy ho amin’ity taona ity no ho tompon-dakan’i Afrika amin’ny baolina kitra ny Malagasy. Tsy misy majia ny baolina kitra sy ny fanatanjahan-tena ka hanaovana tora-po. Efa zava-dehibe ny fandraisany anjara io ka irariantsika izy ireo mba ho tonga amin’ny dingana manaraka. Fantaro aloha ireo ekipa hifanandrina amintsika vao miresaka. Hatraiza ny fari-pahaizantsika Malagasy raha miohatra amin’ireo tarika sy firenena hikatroka aminy ireo? Na eo amin’ny fanomanana sy ny traikefa ananantsika dia azo lazaina fa mbola be no tokony hampiana fa mbola tsy ampy. Na ny “motivation” ho an’ny mpilalao fotsiny aza dia tsy mitovy amin’ny an’ireo firenena hafa.
Matetika dia mandrevirevy ny Malagasy, manonofy atoandro, manao revin-gadra koa. Diso fanantenana matetika amin’ny zavatra ataony rehetra ny Malagasy noho izay toe-tsaina izay. Izany dia mitranga hatrany amin’ny fanaovany pôlitika sy ny fifidianana. Efa voa vao tonga saina.
Raha ny eritreritray mpanoratra dia tianay handresen’i Barea ho tompon-dakan’i Afrika saingy mbola tsy amin’ity taona ity izany.